ဆီးအရောင်က ပြောပြနေတဲ့ ရောဂါလက္ခဏာ - Myanmarload
ဆီးအရောင်က ပြောပြနေတဲ့ ရောဂါလက္ခဏာ
လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ် က 13:41 January 08, 2018
ပုံမှန်ဆီးအရောင်က urochrome လို့ခေါ်တဲ့ အရောင်ခြယ်ပစ္စည်း ပါဝင်မှုပမာဏအပေါ်မူတည်ပြီး အဝါဖျော့ဖျော့ကနေ ပယင်းရောင် ရင့်ရင့်ထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အစားအစာအချို့နဲ့ ဆေးဝါးအချို့မှာ ပါဝင်တဲ့ ရောင်ခြယ်ပစ္စည်းနဲ့ အခြားပါဝင်မှုတွေကြောင့်လည်း ဆီးရောင်ပြောင်းနိုင်ပါတယ်။ ရေသောက်နည်းရင်လည်း ဆီးအရောင်းက ရင့်သွားတတ်ပါတယ်။ ဘယ်လို ဆီးအရောင်တွေက ဘယ်လို ရောဂါတွေ ဖြစ်နိုင်ချေရှိလဲ ဆိုတာကို တစ်ဆက်တည်း ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ဆီးထဲတွင်သွေးပါခြင်း၊ ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်း၊ ဆီးကျိတ်ကြီးခြင်း၊ ကင်ဆာ၊ ကျောက်ကပ်ရေအိတ်တည်ခြင်း၊ အဝေးကြီးပြေးထားခြင်း၊ ကျောက်ကပ် (သို့) ဆီးအိမ်တွင်ကျောက်တည်ခြင်း တို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလို အခြေအနေဆိုရင်တော့ ဆီးစစ်ပြီး ဆရာဝန်နှင့် ပြသ တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။ ချွင်းချက်အနေဖြင့် မုန်လာဥနီ နှင့် ဘယ်ရီသီး စားထားရင်လည်း အနီရောင်ဆီး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ TB ဆေး၊ ဝမ်းပျော့ဆေး၊ ဆီးလမ်းကြောင်းအနာသက်သာစေသော ဆေးများ၊ ကင်ဆာဆေးများ သောက်ထားရင်လည်း အနီရောင် ဆီးသွားနိုင်ပါတယ်။
အသည်းနှင့် သက်ဆိုင်သော ရောဂါများ၊ သည်းခြေပြွန်ရောဂါတစ်မျိုးမျိုး (အထူးသဖြင့် ဝမ်းရောင်ဖျော့ဖျော့သွားလျှင်)၊ ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်ခြင်း တို့လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရေသောက်နည်းလို့လည်း ဆီးအရောင်ပြောင်းနိုင်ပါတယ်။
(၃) အစိမ်းရောင် (သို့) အပြာရောင်ဆီး
အရောင်တောက်တဲ့ အစားအစာအချို့မှာပါဝင်တဲ့ ဆိုးဆေးတွေကြောင့် အစိမ်းရောင်ဆီးတွေ သွားနိုင်ပါတယ်။ amitriptyline, indomethacin, propofol အဆိုပါ ဆေးများကို သောက်ထားရင်လည်း အစိမ်းရောင် (သို့မဟုတ်) အပြာရောင် ဆီး ပြောင်းနိုင်ပါတယ်။
ထို့အပြင် ဖော်ပြပါ ဆီးအရောင် ပြောင်းနေပြီ ဆိုရင်တော့ မွေးရာပါကယ်ဆီယမ်ဓာတ်များသောရောဂါ လည်း ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ ဘက်တီးရီးယားပိုးကြောင့် ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ရင် ဆီးအရောင် အစိမ်းရောင် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
အစိမ်းရောင်၊ အဝါရောင်သစ်သီးများ၊ ရှားစောင်းလက်ပတ် များကို များစွာ စားသုံးမိရင်လည်း ဆီးအရောင် ပြောင်းတတ်ပါတယ်။ ငှက်ဖျားဆေးများ ၊ ပိုးသတ်ဆေး၊ ဝမ်းပျော့ဆေး၊ အကြောပျော့ဆေး များ သောက်ရင်လည်း ဆီးအရောင် ပြောင်းတတ်ပါတယ်။
အသည်း၊ ကျောက်ကပ်ရောဂါအချို့ နှင့် ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်း ကြောင့်လည်း ဆီးအရောင်က အညိုရင့်ရောင် ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
(၅) ဆီးရောင် နောက်ခြင်း
ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်း၊ ကျောက်ကပ်ကျောက်တည်ခြင်းများကြောင့် ဆီးရောင်က ကြည်မနေဘဲ နောက်နေတတ်ပါတယ်။
ဖော်ပြပါ ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတများကို သိရှိပြီးနောက်မှာတော့ ဆီးအရောင် ပြောင်းတဲ့အခါ အရမ်းကြီး စိုးရိမ်နေတာမျိုး မဟုတ်ဘဲ အစားအသောက်ကြောင့်လား? သောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးကြောင့်လား ? ဆိုတာကိုလည်း ဆန်းစစ်နိုင်ပါတယ်။ လိုအပ်လျှင်တော့ ဆရာဝန်နှင့် ပြသတိုင်ပင်ဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။
အားလုံးပဲ ကျန်းမာပျော်ရွှင်သော နေ့ရက်လေးများကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။
သတင်းအရင်းအမြစ် - Dr. မြမျိုးမျိုးဆွေ